Sanad cusub 2017 SMS for Friends Sanad cusub 2017 SMS for Friends
Sanad cusub 2017 SMS for Friends
Sanad cusub 2017 SMS
Rajaynaynaa in sanadka cusub ee la soo xooraa
Just farxad idiin ah oo aan hal jeex
Tan iyo qof kasta oo keliya wuu idin jecel yahay
May dhibaato oo dhan, mar dambe ma aad dhibaato
Tani waa dooni gaar ah Year New aan idiin
Hadda oo sanad jir ah ayaa maray
Ha la soo dhaafay in ka badan ha la
Year New ayaa ka soo bixi oo na rajeyneynaa in fursadaha oo dhan iska leh clockSo ha
Taasi sannadka cusub ee ka mid ah laba iyo toban bilood oo la soo xooraa
Happy New Year ee Advance
Buuxi ilaa noloshaada oo dhan Kalsoonaada iyo farxad
Year New ha idinka soo bixin doonaa farxad iyo barwaaqo news
Oo intaas oo dhammu waxay noqon rabitaanka aan idiin, haatan iyo weligeedba aan aad u jeclahay
Sidaas halkan ka aad raba Year aad u faraxsan New in Advance.
Halkan ka rajeynaya in sanadka cusub waxaa la soo saaraa
Dad badan oo Kalsoonaada iyo wax walba oo wanaagsan
Sidoo kale rajeynaya in sanadka soo saaraa iyadoo tuulmooyin burbur ah oo xiiso leh oo wanaagsan
Oo laad dheeraad ah si ay uga caawiyaan la qaraarada aad
In kastoo habeen ah waxaa laga yaabaa in gudcur
maalmood waa kuwo mar kasta u dhalaalaya
Waxaan jeclaan lahaa in aad noloshaada
Had iyo jeer waxay ka dhergi doonaan iftiinka cirka ka dhalaalaya
Of Ilaah Gifted ah "sanadka cusub"
Sidaas halkan ka adiga iyo kuwa aad jeceshahay doonaya
A Year New Aad u faraxsan 2017 in Advance
Anigu waxaan doonaya rabitaanka aad aan aad u jeclahay, waayo,
Munaasabaddan of a Year New Happy
Diritaanka ee guud ahaan aad u farabadan weyn ee jacaylka iyo rabitaanka wanaagsan
From qalbigayga ku jirta inaan meel kasta oo aad waxaa laga yaabaa in
aad ah Year New Happy Jeclaan 2017 in uu yahay farxadeed iyo riixdey
Sanadka Cusub ku dari karaa in aad nolosha in Kalsoonaada gaar ah
Oo qalbigaaga waxaa ka buuxa jacaylka, nabadda iyo dagganaashiyo
Iyada oo dhan rabitaanka ah in loo soo diray jidkaaga guud
Your nolosha ka dhergi doonaan Kalsoonaada ku rayrayn leh
Of dhalaalaya oo ku faraxsan, cajiib ah Year New 2017 in Advance.
Happy Messages Year New waayo, kuwii ku caashaqi jiray
Year New waa mid ka mid ah maalmaha ugu dabaal sanadka. Waxa uu helay ay ahmiyad iyo qof kasta oo u dabaal maalinta la glore weyn. Maalintii lagu wadaa inuu yimaado ugu dhakhsaha badan ee nolosheena oo aan halkan ka hor fariimaha Happy New Year for jecel iyo saaxiibo yihiin. Inta badan oo inaga mid ah ku qaataan waqtigeena asxaabta iyo lover. Sida ugu naga mid ah waxaa u shaqeeya aan sida caadiga ah aakhirka faqri waqtigeena saaxiibada our xafiisyada iyo sidoo kale waqti qaadan out of our mashquul jadwalka si ay u tagaan oo ku saabsan taariikhda la our jacayl.
Waa arrin aad u muhiim ah in aad iyaga siin rabitaanka gaarka ah maalinta sanadka cusub. Waxay mudan yihiin in dib u jeclaa iyo sidoo kale mudan yihiin rabitaankaaga gaarka ah. Waxaan heysanaa lagala kulmo gaar ah iyaga iyo sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in si gaara weyn iyaga rabto. Waxaannu Dhawaqa ilaa qaar ka mid ah fariimaha ku faraxsan yahay ka hor sanadka cusub idiin. Waxaad samayn kartaa isticmaalka fariimahan siyaabo kala duwan in aad rabto saaxiibada iyo kuwa la jecel yahay. Sidaas, sababta daahay! Samee nuqul ka mid ah our ururinta oo waxaa iyaga la saaxiibada aad wadaagaan iyo jeclaataan maalinta sanadka cusub.
Aynu ka dhigi doonayo a hor 2016 darfihiisa
Si kasta oo saaxiibo kale oo fiican
Xitaa ka dib markii guurka
Xitaa ka dib markii failure
had iyo jeer waxaan soo xusuusan doonaa mid kasta oo kale
Happy New Year ka hor
Xir indhahaaga waxaan leeyahay hadiyad aad u
Waa buufin iyo kaarka
Just in ay doonayso inaad ku faraxsan Year New ka hor
Ma waxaad ka mid tirinta igu horeysay ee aad rabto?
Haddaba maxaad dadka u walaacsan!
Waxaan idin jecel ka hor
Sidaas, in mar kale waxaan noqday qofkii ugu wax gaar ah in aad noloshaada
SMS for Sannadka Cusub 2017
Year New baa imanaysa aynu qorsheeyo xisbi
Qaado dhar iyo kabo cusub si aad u hesho diyaar u
Soo deg oo kaalay oo dhagax weyn oo dabaqa oo kaliya in ay doonayso qof
A Year New aad u faraxsan ka hor
Year New yahay oo dhan ku saabsan farxad
Year New waa dhan oo ku saabsan in ay si dhab ah sida qof walba
Sidaas Waxaad doonaya Advance Happy New Year
Year New waa dhan oo ku saabsan in aan la
Firkradahaan daawo Year New wuxuu ku saabsan yahay in ay yimaadaan
Happy New Year 2017 ka hor
QANACSANAYN NEW YEAR SMS for Friends
Qaata hadda fududahay jacaylka
Duudduubay la daacadda
Uugu xidhan la CARE &
2 Ka dhig u QANACSANAYN & SAFE oo dhan sii dheerayn
NEW YEAR ku faraxsan Advance
Xilli hore ka Happy Messages Year New Sokeeye:
aad rabto guys Happy New Year!! Dadka adduunka oo dhan ayaa loo sugaya ee Year New Happy 2017 waayo, lover u soo dirto ka dibna hambalyadeyda guud saaxiibadood, qaraabada iyo kuwa la jecel yahay. Sida caadiga ah, sanadkasta, Year New dhaco 1da January iyo dadka jidka weyn ka mid ah saaxiibada iyo xubnaha qoyska bilaabi doonaan dabaal xaqa ay u leeyihiin on Habeenka of 31 December. Inta badan dadka jecel soo dhawaynta sanadka cusub by bilaabo tirec ah 5, 4, 3, 2, 1 iyo Happy New Year in mid ka mid ah oo dhan.
Year New A keentaa rajada iyo filayo cusub ee shakhsi walba oo iyaga ka dhigaa inay raadiyaan nasiib wanaag mustaqbalka soo socda. Haddii aad raadinayso ee ugu wanaagsan Happy New Year 2017 waayo, Saaxiibada, waxaan ku soo rabitaanka fiican, xigashooyin, salaan, images, SMS, fariimaha iyo walax kale oo badan.
In 'Bank Universal Ilaah' ...
Ilaah qabaneysa barakooyinka uu & shubo 365 maalmood oo ay ka buuxaan jacayl, iimaanka & farxad aad u ...
Sidaas, Ku raaxayso kharashka ...
SMS Sweet iyo jeclaan karo, waayo, BF GF ah in uu noqon doono ugu wanaagsan ee jacaylka shimbiraha kasta oo doonaya badhkooda intaas ka fiican oo ku beegnaa this. Waxay dareemi doontaa mid aad u gaarka ah iyada oo aad SMS gaaban oo gaar ah ka go'an in ay macaan aad saaxiib jeclaan karo in Advance
fikradaha New, tabo cusub, hadafka aan horay loo arag in lagu dhiirrigeliyo adduunka ee jeer mustaqbalka ugu badato waa inaad sanadkan. Ku raaxayso guuleystay ..... Advance appy Year New. 🙂
Sida shimbiraha, aynu, ka tago ka danbeeya waxa aan ma u baahan tahay si ay u fuliyaan ... cadawtinimo u murugo XANUUNKA cabsi iyo shalaay. Nolosha waa qurux, Ku raaxayso. QANACSANAYN NEW YEAR 2017 in Advance
Renewal Of Heshiiska Saaxiibtinimada 2016 Ka dib markii Tixgelinta Daran Oo taxaddar, Heshiiska waa la soo cusboonaaday Waayo Sannadka 2014. Sidaas, isku dayaan in ay noqon more jecel iyo daryeelidda sanadka soo socda. Is ogow Me of oo i Cayaarin. Maxaa yeelay,, Waa Impossible Si Raadi Friend A Yaa ka 95% saxda 96% smart 97% Kind 98% True 99% tayo leh iyo 100% Sidaas jeclaan karo, Ha lumin Yaad U Marna doonayo in aan iska. aad aad u faraxsan New Yearin Advance Jeclaan
Xilli hore ka Happy Images Year New waayo, kuwii ku caashaqi jiray iyo saaxiibada:
Ha noo illowdaa cabsi our, ha riyooyin oo dhan ayaad noo noqonaysaa oo cad, aynu noqon dheeraad ah dhegeysiga, aynu qadarin dadka nagu wareegsan sanadkan. Year New A yimaado la glows of rajo annagoo maanka. Waxaa noo qabanaysa kalsooni cusub oo ku dhiirranahay inaan mar kale bilaabaan. Sannadkan aynu milicsato Dulmi iyo isku day fiican si ay u wanaagsan tahay.
Good Year New SMS 2017
Sida Year New bilow cusub, ha naga hor dadka wanaagsan, aynu noqon adventures dheeraad ah oo aynu badan oo xusuus dhigi sanadkan. Sida Year New waa in kaararka aan ka soo Images Advance Happy New Year for jecel iyo saaxiibbadayba.
Waxaan rajaynayaa in sannadka cusub waxaana laga yaabaa in aad gool oo dhan waa realized.Remember in aad leedahay daqiiqado xun ee nolosha, waxaa muhiim ah in ay ka gudbaan oo aan marnaba dib ay u eegto fariimaha Advance Happy New Year for caashaqi jiray & Friends.